इराकमा आइएस जिहादी समूहको अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या :: a1nepal.com.np
इराकमा आइएस जिहादी समूहको अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या
नयाँ दिल्ली, ६ चैत । सन् २०१४ मा इराकमा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका ३९ जना भारतीय नागरिकको हत्या भएको समाचार छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले मङ्गलबार सो कुराको पुष्टि गरेको दिल्लीबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले इराकमा तीन वर्षअघि निर्माणसम्बन्धी काममा कार्यरत ३९ जना भारतीय नागरिकको इस्लामिक स्ट्टेस (आइएस)ले हत्या गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
इराकको मोसुल सहरको उत्तरपश्चिम भागमा पर्ने बादुशमोमा नगरको दुर्गम क्षेत्रमा एक सामूहिक चिहान फेला परेको र उक्त चिहान तिनै भारतीय नागरिकको रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो । गाडिएको अवस्थामा रहेका ३९ वटा शवको डिएनए परीक्षणबाट उनीहरु सन् २०१४ मा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका भारतीय नागरिकको भएको स्वराजले संसद्मा जानकारी दिनुभएको छ ।
यद्यपी हिजो सोमबार संसदमा स्वराजले ३८ जनाको डिएनए नमूना परिक्षणबाट पुष्टि भएको र एक जनाको भने आंशिक मात्र मिलेको बताउनुभएको थियो । आइएस जिहादी समूहले सन् २०१४ को अक्टूबारमा इराकको मोसुल सहरबाट ती ३९ जना भारतीय नागरिकलाई अपरहण गरेका थिए ।
इराकमा अपहरणपछि उनीहरुको हत्या भएको अनुमान गरी सोही समयदेखि नै व्यापक मात्रामा खोजी कार्य गरिएको थियो । ती सवै भारतीय नागरिक उत्तरी प्रान्त पञ्जावका थिए । ती कामदार मोसुलमा रहेको एक निर्माणसम्बन्धी कम्पनीमा कार्यरत रहेका थिए । कार्यस्थलबाटै उनीहरुलाई आइएसले अपहरण गरेका थिए । अपहरणमा परेदेखि नै अपहरणकारीबाट भारतीय सरकारसँग फिरौतीका लागि कुनै माग नगरेको सरकारले जनाएको छ ।
पत्नीको सहमतिबेगर राखिने यौनसम्पर्क वैवाहिक बलात्कार नहुने ‘गाजामा कोही निर्दोष छैनन्’ : इजरायली रक्षामन्त्री लिबरमान के इजरायलबारे साउदी अरबको धारणा बदलिएको हो ? इजरायली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्ने पूर्ण हक रहेको साउदी राजकुमारको भनाई प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी भएको फेसबुकद्वारा स्वीकारोक्ती, के भएको घटनामा .. श्रीलंकामा मुसलमानविरुद्धको दङ्गाका कारण सङ्कटकाल इजरायली प्रधानमन्त्री वेन्जामिन नतान्याहु र प्रहरीबिच टस्सल भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीको “इक्जाम वारियर” नाम पुस्तक सार्वजनिक, के छ त मोदीको “इक्जाम वारियर” मा ? उत्तर कोरियाले आणविक आक्रमण गर्दै , प्रतिकार गर्दा पनि निकै खतरनाक ! अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स इजरायली संसदमा बोलिरहदा अरव सांसदको अवरोध अमेरिकाद्वारा प्यालेस्टिनीहरूलाई गर्दै आएको सहयोग कटौती
← बेहुलो भाग्दा ३५ लाख जरिवाना, बेहुली फिर्ता	प्रहरी निरिक्षकले रक्सीले मात्तिएका एआईजीको छोरालाई कुटेपछि ववाल →